राजनीतिमा नैतिकता नभएको, मेरो देश ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	राजनीतिमा नैतिकता नभएको, मेरो देश ? » Nepal Fusion
राजनीतिमा नैतिकता नभएको, मेरो देश ?
२०७६ बैशाख १ गते आइतवार
२००७ साल पछि देश मा राजनीति परिवर्तन भए पछि देश ले बिकास र समृद्धि को फड्को मार्न्ने आसा गरेका लाखौं र हजारौं जनता आज ६९ वर्ष सम्म देश को हाल्त पहिलाको भन्दा झन्न झन विग्र्दो र देश असफलता तर अगाडी बडेको देख्दा कुन चाहिँ जनता निराश न होला । देश किन असफलता तिर जादै छ र जनता र युवाहरू किन देश को हाल्त देखि निराश हुँदै छ । के राजनीति मा नैतिकता भन्ने शब्द नै छैन । सुबर्ण शम्सेर राणा र बिपि कोइराला ले नेतृत्व गरेको कांग्रेस पार्टी ले देशमा प्रजातन्त्र को रङ्ग जनता मा लगाउनै न पाउदै ।
प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने राजा महेन्द्र को कद एक जनता घाती थियो । सायद बिपि कोइराला ले देश को लामो नेतृत्व गरेको भए देशको चित्र बेग्लै हुने थियो । राजनीतिमा बिपि र सुबर्ण संग नैतिकता भन्ने शब्दको भण्डार नै थियो । बिपि र सुबर्णसंग राजनिती गर्ने गणेशमान सिह कुष्ण प्रसाद भट्टराई संग राजनीतिमा हुनु पर्ने नैतिकता थियो यो २०५६ साल सम्म राजनीतिमा नैतिकता भन्ने शब्द कायम नै थियो भन्दा फर्के पर्दैन । २०५६ देखि २०७५ सालसम्म राजनीतिमा नैतिकता भन्ने शब्दको कुनै नाम निसाना न देखिनु नै देश र जनताको लागी त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ । सता र पैसाको लागि जस्तो ब्यक्तिलाई पनि राजनीति नियुक्त दिने र पार्टी नै बन्दाम गर्ने ब्यक्तिहरु राजनीतिमा नेतृत्व मा पुग्छन भन्ने देशमा परिबर्तन कसरी हुन्छ । नैतिकताको आधारमा मन्त्री र उच्च पदमा बस्ने ब्यक्तिले एक दुई जनाले राजीनामा दिए पनि धेरै जस्तो ब्यक्तिले राजीनामा दिएका छैन र करोड करोड भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरु अहिले पनि पदमा बसिरहेका छै ।
राजनीति पार्टी र नेतृत्व वर्गमा नैतिकता भन्ने शब्द ।
भ्रष्टाचार र ठुला ठुला घोटालामा संलग्न ब्यक्तिले नैतिकता को आधार राजीनामा दिनु पर्ने होइन । यहाँ त भ्रष्टाचार र घोटाला भयो ब्यक्तिहरुका आवाज दबाउदै आफ्नो दुनो सोझाउदै छ र पार्टी हाक्ने ब्यक्ति रमिता हेर्दै ठिक छ । नैतिकताको एक पछिल्लो उदाहरण इजिप्टमा एक रेल दुर्घटना हुदा त्यहाँका रेल मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिदै आफु पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।
नैतिकता बिनाको राजनीति सबैको लागी घातक हुन्छ।